Taona 2020: tsy mbola misy ny “parking réservé” | NewsMada
Taona 2020: tsy mbola misy ny “parking réservé”
Tapitra tamin’ny 31 desambra 2019 ny fahazoan-dalana rehetra ho an’ireo rehetra nanao fifanarahana haka « parking réservé » tamin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra. Tsy misy manana fahazoan-dalana hampiasa toeram-piantsonana voatokana avy amin’ny CUA aloha hatreto, amin’ny fiandohan’ity taona 2020 ity, mandra-pisian’ny fandaminana vaovao. Tsy voakasik’izany kosa ny parking ho an’ireo fiarakaretsaka.
Ny fahazoan-dalana ho an’ity taona ity kosa dia mbola miandry ny fahavitan’ny tetibolan’ny kaominina taona 2020 sy ny fandaminana vaovao.
Noho izany, tsy tokony hisy olona na iray aza, afaka hilaza fa manana fahazoan-dalana hampiasa ny toeram-piantsonana manokana avy amin’ny kaominina amin’ity taona 2020 ity, mandra-pisian’ny fampahafantarana vaovao.
Ny kaominina dia tsy mbola namoaka fahazoan-dalana, na iray aza mahakasika ny taona 2020. Araka izany, manentana ireo izay nahazo fahazoan-dalana teo aloha, mba hanala tsy misy fepetra ireo sakana atao amin’ny alalan’ny panneau, rojo vy, hazo, vato, kodiarana sns… fa mahavoasazy ho an’izay minia tsy manala ireo karazana sakana voalaza ireo ary tsy maintsy handraisan’ny mpiasan’ny kaominina fepetra izany.